फेरि बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो त ? – Ap Nepal
काठमाडौं – आज साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । आइतबार तोलाको ९० हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेर ९० हजार ४ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
Prev‘फोटो फिरिममा -२’ हेरेपछि शिशिर भण्डारीकी श्रीमतीले आँखामा आँशु भनिन् , बुढो..के गरेको यस्तो ? (भिडियो सहित)
Nextयस्तो घर , ६ हजार बैंक ब्यालेन्स हुनेले जितिन् चुनाव, बनिन् विधायक